Factorylọ ọrụ China posture ziri ezi na ndị na-eweta ya | qiangjing
Postor ziri ezi
Onye rụrụ ụlọ ọrụ ahụ bụ onye na-edozi ya ma rụkwaa ya kpọmkwem maka ezumike na ije ije na ịgbagọ mmadụ nke omume ọjọọ ahụ kpatara. Ọ nwere ike idozi hunchback, ubu obi, mgbu olu, azụ mgbu na mgbu; dozie ọnọdụ ịnọdụ ọdụ na-adịghị mma, nkwụ nkwụ na ọnya ọnya na-akpata n'ihi ịnọ ọdụ ogologo.
Sittingnọdụ ọdụ na-adịghị mma na-ebute nsonaazụ ahụ anyị. Na ndụ kwa ụbọchị na ọrụ, anyị ga-etinyekwu uche na ya. Maka ahụ siri ike, biko nọgidesie n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ikekwe, i leghaara obere nkọwa n’ime ndụ gị kwa ụbọchị. Ogologo oge mgbu, yabụ ịnọdụ ala ụmụ akwụkwọ abụghị obere ihe, ọ dịkwa mma ị payinga ntị na ndị nkuzi na ndị nne na nna!
Dabere na akụkọ mgbasa ozi n'oge na-adịbeghị anya, a nabatala ihe karịrị ndị ọrịa 100 nwere nkwarụ akụkụ akụkụ a na-emezigharị jikọrọ Njikọ Ndị Nwere Ahụike China. N'ime ndị ọrịa a, ndị ọrịa siri ike ga-enyocha ịwa ahụ.
O siri ike ịwa ahụ n’ọkpụkpụ azụ, n’ihi na enwere akwara azụ n’ọkpụkpụ azụ dị mkpa n’ahụ mmadụ. Ọrụ nke akwara spinal dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na arụ ọrụ ahụ bụ ntakịrị akpachapụghị anya, ọ nwere ike ibute nkwarụ dị ukwuu, n'ihi ya.
Nsogbu nke ọghọm spinal na-emetụta ndị mmadụ abụghị naanị na-emetụta ọdịdị ahụ, kamakwa ọ na-emegide obi na ngụgụ, na-emetụta ọrụ obi na ngụgụ, yana ọbụna na-eme ka mmadụ dị ogologo.
Karịsịa ndị na-eto eto na-arịa isi ike ga-emetụta uto na mmepe. Ọkpụkpụ akwara ji nwayọ nwayọ n'ihi ọnọdụ ịnọ ọdụ, dị ka ịgbada azụ n'azụ akwụkwọ na-agụ na ide, na ọkara ụgha na dina ala na-ekiri TV. Nke a na-egosi na iji zere ịgba ọtọ, mgbochi bụ ihe kachasị mkpa. Ndi nne na nna kwesiri ikuziri ha ihe banyere ya, na-elezi ya ma na-agbazi ya, ma ghara ikwe ka nwatakịrị ahụ hulata n’ịgụ na ide, wee dinaa n’elu ihe ndina mgbe ọ na-ekiri TV. Mgbe ị na-asa ahụ nwa gị, ị kwesịrị ị na-enyocha spain nwa gị maka scoliosis. Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu, gwọọ ya n’oge.
Tupu ọ dị afọ iri na isii, ọkpụkpụ ahụ akpụbeghị akpụ akpụ. A ka nwere ike idozi ndị na-arịa akwara siri ike site na ị na-eme mmega ahụ na yi orthotics; ọ bụrụ na ha karịrị afọ iri na isii, a na-akpụ akpụ ọkpụkpụ mmadụ ma nwee ike dozie ya naanị site na ịwa ahụ.
Edemede Nkụzi Posture Correct
You nwere dọkịta nke gị? Kedu ihe gbasara dọkịta gị nwere ọrụ dịịrị gị?
Onye na-ahụ maka ahụike anyị nwere ezigbo ncheta maka mmadụ niile:
Kedụ nsogbu dị njọ ịnọ ọdụ na-ekwesịghị ekwesị?
Ntachi afọ, ọnụnọ oge adịghị anya, dịka ịzọlata na ịchọ iri nri, ga-akpagbu anụ ahụ, na-emetụta mgbasa ọbara, belata mgbaze afọ, ma na-eduga na ntachi. Ọ na-achịkwa nsí n'ime ahụ ma enweghị ike iwepu ya na oge. Ha nwekwara ike bute ọrịa gburugburu akụkụ ọnụ.
Aka na ukwu oyi
Ọ bụghị nanị na spain na-akwado ịdị arọ nke anụ ahụ dị elu, kamakwa ọwa nke akwara autonomic. Ọ bụrụ na ọnọdụ ezighi ezi, oge na-aga, ọ ga-akpagbu akwara ndị nwere onwe ha, na-eduga n'ọgba aghara, mgbaàmà dịka aka na ukwu oyi, ehighi ura, isi ọwụwa, na ike ọgwụgwụ.
Rụ ogologo oge iji hunchback ma ọ bụ bulie agba ahụ, ịrụ ọrụ na ntanetị, wdg, ga-eme ka spain dị na steeti a na-atụgharị anya, nke ga-pịa diaphragm nke anụ ahụ, nke ga-eme ka iku ume na-enweghị ume, ụbụrụ ga-emekwa. belata hypoxic ogologo oge. Dizziness, ọrịa ngagharị, wdg.
Kechie hunchback ga-edugakwa na -eme ka akwara lymphatic na-eme n’olu na ebe ndị ọzọ, nke ga-egbochi mkpachapụ nke metabolic, belata arụmọrụ metabolism, na-eduga n’inweta oke anụ ahụ, ndị mmadụ ga-enweta oke ibu. Ihu ihu
Ndị nwere ọnọdụ adịghị mma na-enwekarị ike ọgwụgwụ ma ọ bụ nke isi ike, na akwara ihu ahụ na-adị mfe izu ike, na-eme ka ha yie ndị nzuzu.
gbaa okpukpu abụọ
Ọnọdụ na-adịghị mma dị ka mgbatị olu ga-emetụta ọrụ agba na nrugharị ọbara, ma na-eduga n'ụzọ dị mfe mkpofu ahihia metabolic n'akụkụ agba, na-akpụpụta okpukpu abụọ.
Myopia, uto okpukpu
Ihe egwu nke myopia aghaghi doro anya onye obula, otutu ndi mmadu amaghi banyere scoliosis. N'ezie, ọnọdụ scoliosis n'ime ndị nọ n'oge uto abụghị ihe dị ala.
Scoliosis nwere ike ibute ọdịdị anụ ahụ ma na-emetụta mma. A ga-egbochi ogo na ogo ụmụaka. A ga-enwekwa ihe mgbaàmà nke mgbu azụ dị ala, ọrụ cardiopulmonary na-adịghị ala ala, yana oke mkpịsị akwara, na-akpata ọnya, adịghị ike, na ije ije na ukwu. Enweghị nsogbu. Ewezuga ihe ndị kpatara ọrịa a, ịnọ ọdụ ogologo oge bụ isi ihe na-akpata.
A na - ebuli ụkwụ Erlang n'amaghị ama? Nke a ga --emechi ọbara ọgbụgba nke otu ụkwụ, a ga - agbanyekwa ịdị arọ nke elu ahụ n’otu ụkwụ. Ogologo oge, ọ ga-ebute nsonaazụ nke scoliosis ma na-eduga na nkwarụ pelvic.
Osote: Nkwado nkwonkwo ụkwụ
Nkwonkwo nkwonkwo ya na eriri
Aka uwe aka
Hip na-eguzogide mmachi